ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “မဟူရာနောက်ခံဝယ်…….(၁)”
ဒီပို့စ်ကို အောင်စရာပြည့်တို့လို ယောကျာ်းရင့်မာကြီးဖြစ်ရက်နဲ့ သစ္စာဖောက်တတ်တဲ့ သူတွေ ဖတ်သင့်ပြီး ရှက်သင့်တယ်...... ကိုယ်တယောက်ကောင်းစားဖို့ အများစုကို စတေးရဲတာ သိပ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်.........
Ko Paw, I think we should seriously inform Burmese people in Singapore about migration to Australia (especially for people like her).
Ma Kay hasablog entry.
နေနေ တွေ အများကြီးလိုတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နေနေ နဲ့ ကိုပေါ ရေ..
ဒီ စာမူကို ဖတ်ပြီး။ ဇာတ်ကောင် ဖြစ်တဲ့ နေနေ ကို လေးစားတယ်၊ မှန်တယ် ထင်တာကို လုပ်သွားတာပဲလေ
ကျနော်ကတော့ လမ်းပြကြယ်နဲ့ ဝေးရာ ..သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးနဲ့ ဝေးရာ. ကို မတတ်သာလို့ထွက်လာခဲ့ရပေမဲ့. အားလုံးကို မေ့လို့ မရပါဘူး. အမြဲသတိရလျှက်ပါ. တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုထွက်လာခဲ့ရတာကိုလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်များ တာဝန်တွေ မကြေတဲ့သူများဖြစ်နေပြီလား စဉ်းစားမိတယ်. တစ်နေ့တော့ ကျနော်တို့တွေ ပြန်ဆုံပါရစေလို့ဆုတောင်းမိတယ်။
အစစ အရာရာ အတွက် ကိုပေါနဲ့ စကာင်္ပူက သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးပဲနော်
ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်။ လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ရှေ့ဆက်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ..
Ko Paw and Mdm Paw
MK..( Pan twae nal way nay tal )
I have never known n seen u, Nay Nay. But we need such people like u for our country. Try ur best and good luck Nay Nay.
Ko Paw, u r also my favourite blogger. Your blog makes me happy, thinking and upgrade of my knowledge. Whenever I read ur bolg, I told myself to do something for our country.
I am so impress of your memory to remember in detail... and the style of discription.. which take the reader along...
What should I say...like my motto..
We do what we believe in and believe in what we do....
March on Comrade!!!
Today Thi-din-gyut fullmoon day
Whoever older than me...
I pay homage to you all and ask for your forgiveness..
Whoever younger than me...
Even though not pay homage to me, I have forgiven all the sins commited to me willingly or unwillingly...
hee..hee...sound like old man..
But I just practice Traditional Burmese Value...
May Love, Health, Peace and Freedom upon you all...
ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက်.. နံမယ် နဲ့လိုက်အောင်..နေ လို ကျင့်ကြံ ပြီး.. ဗမာပြည် အတွက်..ဆက်လက် ရှင်သန်နေပါစေ။
( မသိဘူးသော်လည်း..လေးစား ခင်မင်လျက်)
ဒီတခေါက် စင်္ကာပူကို လာရတာ လုံးဝမပျော်ဘူး။ ရင်ထဲမှာ တခုခုလိုနေတယ်။ အစ်ကိုတွေအတွက် ဝမ်းနည်းနေရတယ်။ “မနေ” မရှိလို့ လမ်းပြကြယ် စာကြည့်တိုက်မှာ မပြည့်စုံဘူးလို့ ပြောရင်စင်္ကာပူအစိုးရ ဝမ်းသာနေမလားပဲ။ မြန်မာအစိုးရ နည်းတူ စင်္ကာပူအစိုးရ ယုတ်မာနေတာတွေကို သိလိုက်ရတယ်။ စွန့်လွတ်အနစ်နာခံရဲသူတွေ နဲ့ သစ္စာဖောက်သူတွေကို ကွဲပြားစွာ သိရပြီ။ ဘယ်သူတွေထပ်ပြီး သစ္စာဖောက်မလဲ။ ကြိုက်သလိုဖောက်ကြ။ စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာပြီး၊ မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုအတွက် "Ready To Do For Everything " ။ မြန်မာလူမျိုးများကောင်းစားရေးအတွက် ဦးဆောင်နေသော သူအားလုံးကို လေးစားစွာဦးညွှတ်ပါ၏။ ဇာဇာထွန်း (ဘယ်အစိုးရကိုမှ မကြောက်တတ်သူ ၊ သောတာပန် ဖြစ်ချင်သူ)
ထင်ရှားသူတယောက် အဝေးရောက်သွားတာ ကွက်လပ်ဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့တယ်။ Cityhall လည်းချောင်သွားတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
စင်္ကာပူအစိုးရ က ဒီကိစ္စကို အခုလိုလုပ်တာဟာ ဘယ်သူမှသစ္စာဖောက် တယ်မဖောက်တယ်ဆိုတာ ထက် သူ့တိုင်းပြည် အကျိုးစီးပွားအတွက် နဲ့ နအဖ နဲ့ ပေါင်းပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။လူ တစ်ယောက် သစ္စာဖောက်ယုံနဲ့ ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး၊ အနေအထားကို သေချာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါဦး၊ ပင်နီစူးလား ပလာဇာမှာ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး (ကွန်မသာဇင်) ပေးရောင်း ပြီး informer လုပ်ခိုင်းထားတဲ့လူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ၊ပင်နီစူးလား ပလာဇာက ဘယ်ဆိုင်တွေက ဘယ်လောက်သတင်းပေးနေသလဲ၊တစ်ရားမ၀င် နေလို့ အဖမ်းခံရပြီး special pass နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးထားတဲ့ သတင်းပေး ဘယ်နှစ်ယောက် ကိုသိပါသလဲ၊ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ၊ စလုံးအစိုးရရဲ့ ဟိုအရင်ကနဲ့ ရော အခုရော နအဖ နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုတွေ ကိုရော ပြန်လည် ဖွေရှာ ဖတ်ရှု ဖော်ထုတ်ပါ။ နအဖက ထောက်လှန်းရေး တပ်ဖွဲ့ ခွဲ ၂ ခွဲ လွှတ်ထားတာ ကြာခဲ့ပါပြီ၊ မနှင်းဆီရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်နဲ့ မနေနေ ကို ကိုယ်ချင်းစာနာမှု အတွက် လေးစားပါတယ်၊ အခုလို ဒီမိုကရေစီ ဆန်ဆန်ဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။ နောက်နောင် ယခုထက် လိမ်မာပါးနပ်စွာ အမှန်ကို ထောင့်စေ့စွာ ဝေဖန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မနှင်းဆီတို့လို မျိုးချစ်များ အများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။
ဝေဖန်ထောက်ပြ မှုအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။ ယခုလို အမှန်ကိုမြင်သော မျိုးချစ်လူငယ်များ အထူးပင်လိုအပ်လှပါကြောင်း။ အနာဂတ် တွင် အမှန်ကို ယခုထက်ပိုကာ လေ့လာသုံးသပ်၊ထက်မြက်စွာ ပေးသော အကြံညဏ်များကိုသာ မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊
အကိုပေါ Post ကို ထပ်ဆင့် ကူးယူ တင်ပြထားပါကြောင်း
ဝေဖန်ထောက်ပြ မှုအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။ ယခုလို တိုင်းပြည်ချစ်သော မျိုးချစ်လူငယ်များ အထူးပင်လိုအပ်လှပါကြောင်း။ အနာဂတ် တွင် အမှန်ကို ယခုထက်ပိုကာ လေ့လာသုံးသပ်၊ထက်မြက်စွာ ပေးသော အကြံညဏ်များကိုသာ မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊
လူဆိုတာ..သူများကိုတော့ လိမ်လို့ရပါတယ်... ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော့လိမ်လို့မရပါဘူး.... ကိုယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ.. အသိဆုံးပါပဲ... သတင်းပေးလုပ်လား မလုပ်လားဆိုတာကို ဒါပေမဲ့...မကူညီရင်ဘေးထွက်နေ..မနှောင့်ယှက်သင့်ပါဘူး
ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးနေကြတာပဲ.... လိပ်ပြာသန့်ရင် လုံရင်..ပြီးတာပါပဲ.... လူပုံအလယ်မှာ အပြစ်ကင်းချင်ယောင်တော့ မဆောင်ပါနဲ့... ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်....
KO Min Thein
Pl dont say with bigger words.
I called ur ph no.8186 0042 to curse u.
But u dont hold my calling .
haaha( dont say that not free).
If u want to come Cityhall.
I waiting Scythe.
နိုင်ငံခြားမှာမလို့ စစ်အစိုးရကို တော်လှန်နေတယ်လို့ မထင်နဲ့
မမျှတမှုတွေ ဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ ကိုမင်းသိန်း လို လူမျိုးတွေ မြန်မာပြည်ထဲမှာ များနေလို့ပါပဲ
ကိုကျော်ဇင်မင်း လို လူတွေလည်း အများကြီးနော့
ခင်ဗျားကျေးဇူးတင်စေချင် လို့ မြန်မာ့အရေး လုပ်နေသူ တဦးမှ မပါဘူး
လူတွေကြားမှာ ဝင်မပါရင် ကောင်းမယ်
အင်း... ခုမှပဲမြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ မရနိုင်တဲ့ အကြောင်းကို သိတော့တယ်၊အရေး မပါတဲ့ လူတွေကို အပြစ်မြင် အရေးပါတာတွေကျတော့ မမြင်၊ဒီလို စနစ်မကျပဲ နဲ့ တော်လှန်လို့ကတော့ တော်တော် မလွယ်ပါဘူး၊ လူတော်တွေ ပညာတတ်တွေက လမ်းဘေးက အလုပ်လုပ်သလို မရပါဘူး၊ ရသလောက် လုပ်တာကတော့ မှန်ပါတယ်၊ မလုပ်တာထက် စာရင် လုပ်တာက ကောင်းပါတယ် ငြိမ်နေတာထက် စာရင် ရသလောက် တော်လှန်တာက ကောင်းပါတယ်၊ ပိုမို ကျစ်လစ်သိပ်သည်း တဲ့ လှုပ်ရှားမှုမျိုးကို အလိုရှိတယ်၊စာများများ ဖတ်ဖို့လိုတယ်၊ငါတို့ ဘာလုပ်လုပ် ကိစ္စ မရှိဘူး၊ဗြောင် လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို ဖျောက်ဖို့သင့်ပြီ၊ လျှို့ဝှက် သင့်ရင် လျှို့ဝှက်ရမယ်၊ အခုကိစ္စ မှာ လူတစ်ယောက်က သတင်းပေးလို့ ဒီလို ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလူ က တော်တော် အရေးပါတာပဲ၊ တစ်ခြားလူတွေ နေရာပေါင်းစုံက လူမျိုးစုံက မသိနိုင်တော့ ဘူးလားလို့ မေးစရာ ရှိလာ တယ်၊ ဟုတ်ပြီ အဲဒီလို ဆိုရင်လဲ လုပ်စရာ ရှိတာ သိုသိုသိပ်သိပ် ဆက်လုပ်ကြပါ။
လုပ်စရာတွေက အများကြီးပါ၊ အပြစ်လဲတော်တော်တင်ပြီးသွားပါပြီ။ဘေးနား မှာ ထိုင်ပြီး အားပေးတဲ့ လူတွေကော၊မပါနိုင်သေးတဲ့ လူတွကိုရော စည်းရုံးဖို့လုပ်ရအုံးမယ်။အများကြီး ရှေ့မှာကျန်သေးတယ်။
ကိုပေါ ပြောတာလဲ မှန်ပါတယ်... (ကိုပေါထင်လို့ပြောမိတာ မဟုတ်လဲ ဆော်ရီးပါ..)
အခုလဲ အပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး.. ကြုံလို့ပြောမိတာပါ.... တယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လက်ခံပါတယ်.. ဒါပေမဲ့... တယောက်ကနေ မယုံကြည်ရတဲ့သူတွေ များလာနိုင်လို့ပါ.... သူလို ပူးဝင်သူတွေက ပိုကြောက်ရပါတယ်..... သတိထားဖို့ ပြောမိတာပါ....
ဘယ်သူ့ကွန်မင့်ကို ရည်ညွှန်းချင်တာလဲတော့မသိ။ ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာရော သူများဘလော့ဂ်မှာပါ မည်သည့်ကွန်မင့်ကိုမဆို “ကိုပေါ” နာမည်နဲ့ဘဲ ရေးပါကြောင်း။
မဟုတ်ဘူး ကိုပေါလက်စွပ်စွတ်ထားလို့ ..
အားလုံးကို လျှို့ဝှက်သတင်းပေးမယ်ဗျိူ့ !
ခွှတ်လွှတ်ပါ စာဖတ်နေရင်း :O
မပေါက်တာထက်စာရင် ပေါက်တာက ပိုကောင်းလို့ပါ :P
Ooo. I knew her and her mother when I come to Lanpyakyal. But I just knew her name is Ma Nay Nay.
Sad to hear that. I want to write short shory about how I memorized about her at Lanpyakyal.
Ko Paw ---- Pls help me get her permission.
ဒေါင်း တွေ ကြား က လဒ တွေ ကို ဖေါ်ထုပ် ကြပါ
Ko Nyi Thit.....Sure, I will ask her and let you know from this comment session.
Yarma....... နောက်တော့လည်း အလိုလို ကွဲပြားသွားမှာပါ။
Ko Nyi Thit..... I have asked Ma Nay Nay and she said, "She is fine with it."